ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: စံပြ ခေါင်းဆောင်မှု သမ္မတလင်ကွန် ၏ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်...
စံပြ ခေါင်းဆောင်မှု သမ္မတလင်ကွန် ၏ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်...
by Shae Shae Century on Thursday, July 26, 2012 at 8:59pm ·
၁..ရုံးခန်း တဲ က ပန်ကာ အောက်မှာ ချည်းထိုင်မနေနှင့်.အပြင်ထွက်ပြီး.လူတွေကြားမှာအမှန်ရှာပါ..လူတွေအကြောင်းသိအောင်ကြီုးစားပါ
၂..လူတစ်ယောက်အား မီန့်ပေးစေခိုင်းခြင်းထက်...သူထင်မြင်ချက်ကိုယူပြီးစေခိုင်းလျှင် ပိုမိုထိရောက်သည်....
၃..လင်ကွန်း သည် စိတ်ရှည်သည် ဇွဲရှိသည်.စွဲမြဲသည်..အမီန့်မပေး။ဆွေးနွေးစည်းရုံးသည်..သိုသော် လိုအပ်လျှင်တော့အလွန်ပြတ်သားသည်.....
၇.လက်အောက်ငယ်သားများ နှင့် ချီန်းဆိုတွေဆုံခြင်းထက် ရှောင်တခင်တွေဆုံခြင်း ကိုပိုအလေးထားသည်လက်ောက်ငယ်သားများ ကသူတို အနေဖြစ် သူတိုခေါင်းဆောင် နှင့် တွေဆုံဆက်ဆံရန် လွယ်ကူသည်ဟုမှတ်ယူလျှင်.ခေါင်းဆောင်အပေါ်တွင် အကောင်းမြင်လာနိုင်သည်..ယုံကြည်လာနိုင်သည်....
၈..လင်ကွန် သည် အလွန်စိတ်ကောင်းရှိသည် သူစကားတွင်ကြင်နာမှုပါသည်..သူအပြုံးကြောင်အားတက်ရသည်..သူဟာသ ကြောင့်
ရွှင်လန်းရသည်..သူနဲတွေဆုံပြီးနောက်ရုံးခန်း မှပြန်ထွက်လာသောအခါ တွင်လည်း သူအမှုအရာ နှင့် သူစိတ်ထား ကို ထူးထူး ခြားခြား
၉..ချီးကြူးတာကို လူတိုင်း ကြိုက်သည်မကောင်းပြောခံရခြင်း နှင် ကြားရခြင်း ကိုနှစ်သက်သလို ချီကျူးခံရခြင်းကိုလည်း နှစ်သက်သည်.
၁၀ရှေးတန်း စစ်စခန်း များသိုသွားရောက်ပြီး..တပ်ဖွဲများကိုစစ်ဆေးသည်အားပေးသည် လက်နှစ်ဖက်ဖြစ်.စိတ်ပါလက်ပါ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သည် တကယ် ရိုးသား ဖြူစင်သည် နှလုံးသားဖြစ် လှိုက်လှဲစွာနှုတ်ဆက်သည်
၁၁..ဒဏ်ရာ ရစစ်သည်များ ကိုသွားရောက်ကြည်ရှုပြီးအားပေးစကားပြောသည်..အသုဘအခမ်းအနားများသိုတက်ရောက်သည်
၁၂.အကူအညီရရှိနုိုင်ရန် အကောင်းဆုံး နည်းများ သူတိုနှင့် အကျွမ်းတ၀င်ရှိနေရန်လိုအပ်သည်.မကြာခဏတွေဆုံ..လူမှုဆက်ဆံရေးတည်သည်..
၁၃.ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အဖို လူတွေကိုလုပ်ငန်းခွင် အပြင်ဘက်တွေဆုံခြင်း.ဖြစ်အကျိုးတူရရှိစေနိုင်သည်..လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပတွေဆုံရခြင်းသည်.ကိုလ်စိတ် နှစ်ဖြာပိုသက်တောင်သက်သာရှိစေသည်.ပိုပွင့်လင်းကြသည် ပိုရိုးသားကြသည်....
၁၄.အတွေးအခေါ်တစ်ရပ် ကို လူတွေလက်ခံအောင်လုပ်ရာတွင် အထိရောက်ဆုံးနည်..တစ်ခု...ယင်းအတွေး အခေါ်ကို.မီမီနေ့စဉ် လုပ်ရပ်တိုင်း တွင်ထပ်ဟပ်ပြခြင်းပင်ဖြစ်သည်..
၁၅..လက်အောက်ငယ်သားမျာ..၏..ပတ်ဝန်းကျင်တဲ.သိုဝင်ရောက်ခြင်း တရင်းတနှီးဆက်ဆံခြင်းတိုဖြစ် ယုံကြည်မှု ပူးပေါင်းဆောက်ရွက်မှု တူညီစုစည်းမှုကိုရရှိနိုင်၇န်
၁၆.ထီရောက်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချနုိုင်ရန်အချက်အလက်မှန်များရဘိုလိုအပ်သည်.ကိုယ်တိုင်သွားရောက်စုံစမ့် နုိုင်လျှင် ကိုယ်ယ်တိုင်သွားသည်..မသွားနိုင်လျှင် လူယုံကိုစေလွှတ်သတင်းမှန်ကိုယူနိုင်သည်..
၁၇..တစ်ဖက်သားကို..နားထောင်သည် အရုံစိုက်သည်.ယုံကြည်မှုထူထောင်သည်.လက်အောက်ငယ်သားများနှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးနေထိုင်ခြင်းဖြစ်ဖြစ်..ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ပဋိပက္ခ နှင့် မကျေနပ်ချက်များစွာ ကို ကျော်လွှားနုိုင်သည်.....
၁၈..လင်ကွန်သည်..ပြတ်သားသော်လည်း ဘယ်တော့မျှ အမီန့်မပေး အပြုအမှုအားဖြစ်.သဘောတရားအားဖြစ်ဖျောင်းဖျစည်းရုံးတက်သည်.....
၁၉..တစ်ဖက်သားအား..မီမီအလိုသို့ ဆွဲဆောင်လိုလျှင် မီမီသည် ထိုသူ၏ မီတ်ဆွေ ကောင်းဖြစ်ကြောင်း သူယုံကြည်အောင်ကြီုးစားပါ.
၂၀..သူသည်.သူတစ်ပါးက သူကိုဆက်ဆံစေလိုသည်..အပြုအမှုအတိုင်းသူကလည်းသူတပါး ကိုပြုမှုဆက်ဆံသည်........
၂၁..အတင်းအကျပ် ခိုင်းခြင်းကိုဘယ်သူမျှမကြိုက် မီမီအလုပ်.မိမီအယူအဆကိုမီမီအထင်ကြီးခြင်းသည် လူသဘာဝဖြစ်သည်။
၂၂.ပွင်းလင်းမှု.ယုံကြည်စွာတာဝန်လွှဲပေးမှုညွှန်ကားမှု တို.ဖြစ် လူတစ်ဦးချင်းစီစစ်ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကိုရယူသည်။
၂၃..ဌာနတစ်ခုနင့် သက်ဆိုင်သောကိစ္စကို တိုဌာန၏ အကြီးအကဲ နှင့် မတိုင်ပင်ပဲ မပြုလုပ်ရန် အမြဲတမ်း သတိပေးသည်။
၂၄..ဌာနတွင်း မကျေနပ်ချက်များ ကိုအာမပေးနှင့် ညိုနှိုင်းစေ့စပ်ရန်.လက်အောက်ငယ်သားများအား အမြဲတမ်းဖျောင်းဖျဆွဲဆောင်ပါ။
၂၆..ခေါင်းဆောင်သည် နောက်လိုက်များအား လက်ရှိအခြေအနေမှ မျြင့်တင်ပေးရမည် နုိုးကြားလာအောင် အားတက်လာအောင် တာဝန်
၂၇..လင်ကွန်သည် ပြောသလိုလုပ်..လုပ်သလိုပြောသူဖြစ်သည်.သူသည်အထက်သို့ရောက်သွားသောအခါ အောက်သို. ပြန်လှည်ကြည်ပြီးအောက်ကလူတိုအပေါ်သိုတက်နိုင်အောင်ကူညီသည်။
၂၈..ယုံကြည်ခြင်း။ရိုးသားခြင်း နှင့် မှန်ကန်ဖြောင့်မတ်ခြင်း တိုသည် ခေါင်းဆောင်မှုတွင်အလွန်အရေးပါသောအရည်းချင်းများဖြစ်သည်။
၂၉..မရိုးသားသူများနင့်လုံးဝမဆက်ဆံမှန်ကန်တဲ့ လူနဲသာအတူတူရပ်ပါ.သူမှန်ကန်နေတဲအချိန်မှာ သူနဲအတူတူရပ်ပါ သူမမှန်ကန်တော့ဘူး ဆိုရင်တော့ သူနဲ ခွဲခွာလိုက်ပါ။
၃၀..သူတပါး အား ပုတ်ခတ်စွတ်စွဲခြင်းနှင့် မနာလိုခြင်းတိုသည်..တန်းဖိုးရှိသောလုပ်ငန်းများအတွက်တန်းဖိုးရှိသော.အချိန်ကို အကျိုးမဲ့ဖြုန်းတီးခြင်းဖြစ်သည်။
၃၁..လူတစ်ယောက်အားနှိပ်ကွပ်လျှင် ထိုသူနှင့် ထိုသူ၏ မီတ်ဆွေများသည် မီမီအဖွဲ.အစည်းအတွက်ထာဝရရန်သူများဖြစ်လာနိုင်သည်။
၃၃..ဒေါသထွက်စရာ များ.ကိုရယ်စရာ များအဖြစ်ပြောင်းလဲမှုမြင်တက်သည်။သူက ဟာသဥာဏ်ရှိသည်.ဖြတ်ထိုးဥာဏ်ကောင်းသည်
ပုံတိုပတ်စအပြောကျွမ်းသည်.ယင်းတိုသည်.သူအတွက် မတရားဝေဖန်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေသောဆေးစွမ်းကောင်းများပင်ဖြစ်သည်။
၃၄.သူတစ်ပါးက ဝေဖန်တိုက်ခိုက်လာလျှင် အသေးအဖွဲ့တွေကို လျစ်လျူရှုထားလိုက်ပါ.ကြီးကျယ်လျှင်တစ်မျိုး.တစ်မည်ပြောင်းလဲသွား
အောင်ပြန်တိုက်ပါ.ဒေါသပြောသွားအောင်ဖြေရှင်းချက်ရေးပါ.သိုသော် ဘယ်သူဆီမျှမပိုပဲ သီမ်းထားလိုက်ပါ.အကောင်းဘက်ကိုကြည်ပြီး.ဟာသဥာဏ်ကို အမြဲတမ်းအသုံးချပါ။
၃၅..အကျပ်အတည်း ကြုံလာလျှင်အေးဆေးတည်ငြီမ်အောင်ကြီုးစားပါ။အမှားအမှန်ကို ခွဲခြားသိမြင်ပါစေ့။သတ္တိရှိပါစေ့..ကိုတက်နိုင်သလောက်.ကိုသိသလောက်.အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ.ပြီဆုံးအောင်အထိလုပ်ပါ။
၃၆..မီမီလုပ်ရပ်သည် ရည်မှန်းချက်ကို ထိခိုက်နေပြီ ဟု ယုံကြည်လျှင်လျေ့ာလုပ်ပါ ၇ည်မှန်းချက်ကို အထောက်အကူပြုသည်ဟု ယုံကြည်လျှင် ပိုလုပ်ပါ အမှားကိုမြင်လျှင်ချက်ချင်းပြင်ပါ...အမြင်သစ်...အမြင်မှန်ကို အမြဲတမ်းကြီုဆိုလက်ခံပါ။
၃၇..ကိုယ်ကိုယ် ကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်ကြီုးစားမယ်ဆိုတဲလူမှာ..ပုဂ္ဂိုလ်ရေး..ပဋိပက္ခအတွက် အချိန်ဖြုန်းနေဖို အချိန်မရှိဘူး.
၃၈.နှေးနှေးကလေး နင့် မြန်မြန်လုပ်ပါ။
၃၉..အသက်မသေအောင်လည်းကာကွယ်ရမယ်.ကိုအဂါင်္အစိတ်အပိုင်းတွေမပျက်စီးအောင်လည်း ကာကွယ်ရမယ်.ဒါပေမဲ တခါတလေမှာ အသက်ရှင်ဖို အတွက် ကိုအဂါင်္အစိတ် အပိုင်းတခုခုကိုဖြတ်တောက်ကုသရမျိုး လည်းရှိပါတယ်..ဒါပေမဲ့.ကိုလ်အဂါင်္အစိတ်အပိုင်းအတွက် အသက်ကိုတော့ ဘယ်တော့မျှအဆုံးခံမှာမဟုတ်ဘူး ကျုပ်ကတော့ တိုင်းပြည်တည်မြဲအောင်ထိန်းသိမ်းရင်းဖြစ်သာ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်မြဲအောင်ထိန်းသိမ်းရမယ် လိုယုံကြည်တယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:16 PM